Top European Train Tours You Shouldn't Miss | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Top European Train Tours Okufanele Miss
Ukuhamba naphi usoloko emangalisayo kwaye siyenze ukuze ubone izixeko ezintle, ngembali yelizwe okanye iinkcubeko ohluke kakhulu kweyethu. kunjalo, akunyanzelekanga ukuba uye kude ekhaya bafumane iindawo ezintle. Kukho ezimbalwa uhambo ngololiwe aseYurophu likhubalo ezikhethekileyo ufanelwe ndawo ngokungathandabuzekiyo kuluhlu wish mhambi yethu. ukusuka ebukekayo iidolophu aseYurophu iingqukuva kunye imbali etyebileyo namasiko, uthathe ixesha bafumanisa ukuba sesiphi imizi ukuba batyelele.
Nazi ezinye ezithathwa Uloliwe yaseYurophu akufanele miss:
Siya kuya ilizwe ukufudumala, ngqo, kummandla omhle the Country Basque. Apha sifumana ukuba ikomkhulu yesibini yaseYurophu kwenkcubeko waba 2016: San Sebastian. Esi sixeko sihle ibekwe kunxweme langasentla usoloko phambili iitshathi ihlabathi ngenxa yayo umnikelo ezizwe kwaye yayo lively nightlife. Kwelinye icala, ucinga, amaqela kwaye axoxe ziyinto uya kuwa ukuyithanda. Yinto eqhelekileyo ukuba fumana iziganeko malunga unguye, umculo, nomdaniso kuzo zonke iimbombo isixeko. ngoko ke, it is one of the greatest in Speyin yaye inxalenye yohambo yethu uloliwe zaseYurophu ukutyelela size sichithe usuku Usihlube iindawo yayo intle entanjeni ngokuhlwa kunye isidlo okumnandi kunye cocktails ngaselwandle.
Xa intliziyo Jemani , iyure e Berlin, kukho esinye isixeko akufanele miss. Leipzig liya asakhulayo njengeyona ndlela mihla olugqithayo eyinkunzi. Mhlawumbi kungenxa yokuba wayo imbali ibalulekileyo, ezinxulumene namagama ezifana Bach and Wagner; okanye, mhlawumbe, kuba iindawo zawo enkulu eluhlaza, ayikabi ezoyiswa ngezandla ngumyinge. Kungenzeka kwakhona kuba umphefumlo wayo cwaka, apho art kunye nomculo iyamangalisa. Njengokuba kude kangangoko amahle ukhenketho uloliwe European ukuya, lo mntu ngokuqinisekileyo kunomvuzo.
Bremen ku Leipzig Uqeqesha
EBerlin ku Leipzig Uqeqesha
Hanover ku Leipzig Uqeqesha
EHamburg Leipzig Uqeqesha
I-West iRhine Railway European Qeqesha Tours, Jemani
Kuba wonk 'ubani uthanda nohlaza, knockout ubuhle, iinqaba kunye kwelanga wageza izidiliya, le elula intle ecaleni iRhine River kulapho kufuneka uye. Uhambo phakathi imizi German Cologne ne Mainz mnye lafika ilixa, nizikhumbule ngonaphakade kanaphakade. ubume bayo umfanekiso-ogqibeleleyo akushiye kanzima! romantics True abakholelwa neziphelo happy magic fairytale ziya ndimnqule iinqaba ebukekayo peeking nge izidiliya eziluhlaza. I-West iRhine kaloliwe yaziwa lonke njengenxalenye uhambo "Romantic iRhine", ke ukuba eso usiphetheyo sifana umntu omthandayo lokuza, ukwenza njalo. Uza kuba ixesha ayilibale, efanayo abanye abaninzi abaye West iRhine kaloliwe inxalenye yohambo lwabo kaloliwe European.
Cologne ku Mainz Uqeqesha
Frankfurt ku Mainz Uqeqesha
EBerlin ku Mainz Uqeqesha
EBrussels ku Mainz Uqeqesha
I Lyon ezintle yeyona inkulu isixeko yesithathu Fransi yaye iziko enamandla yokwenene lizwe. Yinto nakanjani a ezikulungele ngakumbi ekuyiwa ekhululekile ngaphezu capital, ezifundisa ukuzonwabisa kuwo wonke amagumbi. Lyon likwazi konke: olondolozo lwembali, zokudlela, boutiques, kunye nakwiivenkile yokuqala, ngokunjalo inani elikhulu imivalo neentonga. Kuyinto kwakhona eyunivesithi zisebenza emzini, kakuhle exabisa utyelelo zikhenkethe yakho Uloliwe European. Beautiful izakhiwo ebheke Rhone River, elikhulu zokulondoloza kunye nemo engqongileyo ukuqhayisa iimpembelelo ezahlukeneyo French yenkcubeko - into ukuba ukuthanda?
I Marseilles kwiLyon Highspeed Trail
IAmsterdam eya eLyon Highspeed Train
[https://www.youtube.comwatch?= I mozmhlEKk0E
Akukho ukhenketho Uloliwe aseYurophu ngokupheleleyo ngaphandle ekhwele ngokusebenzisa nenkangeleko entle Tuscany. Lo mmandla ku unikeza central Italy izinto oluhle kwaye inika amanqaku eliqela umdla kwenu ngokupheleleyo kufuneka utyelele. Ukususela kakhulu lenkundla Renaissance art kaMichelangelo kunye Botticelli, ukuba imisebenzi emihle kakhulu Mother Nature kule Apennines, Tuscany awuve. Uhambo uloliwe zokucwangciswa kakuhle kuthatha kunxweme Sea Tyrrhenian, okanye ukuvumela ubona ezidiliyeni esidumileyo Chianti.
EMilan ukuya Chianti Castellina Uqeqesha
UFlorence Chianti Castellina Uqeqesha
Naples ku Chianti Castellina Uqeqesha
ERoma Chianti Castellina Uqeqesha
Gcina A Isitimela kunceda ukuba wenze uloliwe oya endaweni oya kuyo 3 imizuzu, amazinga libiza kancinane kwaye wayekiswa iimali ukubhukisha owakhe!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-european-train-tours/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe